Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in mp3
Qeybta 2: 2 sababaha diinta m2ts in mp3
Qeybta 3: Sida loo badalo m2ts in mp3 fudud oo degdeg ah oo ku saabsan daaqadaha iyo Mac
Marka ay timaado in adduunka internet ka dibna dhammaan ayuu ka sarreeyaa ay shaki ah qaab mp3 waa Qolyihii caadiga ah in uu yahay in la isticmaalo muddo aad u dheer hadda oo wuxuu hubiyaa in files aan la soo ciyaaray oo kaliya laakiin waxa ay sidoo kale soo jeesan oo aan arin kasta iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab mp3 waa in la isticmaalo tan iyo 1993 si loo hubiyo in dadka isticmaala ee la siiyo adeegyada ugu fiican oo files waxaa lagu ciyaaray macaan oo xawaal hab.
Marka ay timaado in la sheego sababo markaas waxa aad u muhiim ah in la ogaado in sababaha yihiin faro badan taas oo horseedaysa user a dhinaca diinta ee m2ts files si mp3 files oo aan wax arrintan iyo dhibaato. In qaybtan ee maqaalka waa in lagu sameeyo hubin doona in faa'iidooyinka qaab mp3 ah ayaa lagu muujiyey sida faa'iidooyinka, kuwaas oo sidoo kale waxa loo arki karaa sababo si uu u hubiyo in qaab ah waxaa loo baddalaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Faa'iidooyinka waxa kale oo hubin doona in user yimaado inuu wax ka ogaado faa'iidooyinka ee luuqad fudud sida tan loo hubiyo in user ku noqotaa warqabaan xaqiiqooyinka la xidhiidha mp3 iyo sababta loo isticmaalo sida Qolyihii borotokoolka ciyaaraha dhawaaqa ka dhigi doonaa adduunka oo dhan.
Cabbirka data of mp3 waa yar marka ay timaado audio qaabab ciyaareed ah ku sifayn la mid ah. Waxaa loola jeedaa in ay kordhin file mp3 qaadan meel yar ku disk iyo in la hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxa kale oo hubin doona in user waa inay awoodaan in ay qoraan qaar ka mid ah files si disk ama si kale loo dhigo dooxi karaa disk ah xaddiga badan oo xogta aan dadaal badan. Iyadoo dhalashada mp3 kala iibsiga file ayaa sidoo kale noqday mid aad u fudud, lagu kalsoonaan karo iyo kharashka wax ku ool ah.
Ratio riixo waxaa marnaba go'an in qaab mp3. Waxa si fudud oo macnaheedu yahay in user a cadaadin karo faylka ilaa uu ka noqdo iyada oo la raacayo size file waa in lagu kaydin ah. Waa mid ka mid ah habka ugu dhaqma adduunka oo dhan iyo user wuxuu leeyahay ganacsiga off u dhexeeya tayada audio iyo baaxadda file ah oo si fudud loola jeedaa in yar size file ah waa kii ugu xumaa waxay noqon doontaa tayada audio arrintan la xiriira. Waxaa si kastaba ha ahaatee ma dhibin dadka isticmaala ay xaalado badan sida user had iyo jeer waa ka walaacsan codka taas oo ah in la maqlo in arrintan la xiriira.
Waa qaab ah in si weyn loo isticmaalo in ku dhowaad dhammaan dhawaaqa ciyaaro qalabka lagu soo diyaariyay abid. In qaabka hab maamuuska mp3 ah waxaa si balaadhan looga aqbalay ciyaartoyda ay og u ciyaaro faylasha sida loo eegin ay samaynaysaa iyo horumarinta. Si aad u hesho in erayada fudud waxa aad u muhiim ah in la ogaado in files ee arrintan la xiriira ma yara kaliya ee size laakiin users hadda loo hubiyo in files yihiin diinta mp3 oo inta badan convertors si fiican yihiin waxa aad u muhiim ah in la soco in qaab mp3 la soo xulay mid ka mid default si loo hubiyo in user Khasab ma aha in ay doortaan qaab waqtiga iyo mar kale oo ay muujinaysaa in horumarinta convertor ka adduunka oo dhan ugu hubiyo in qaab mp3 la siiyo meeshiisii ​​run ah.
Marka ay timaado in diinta ka badan Mac markaas Wondershare ee arrintan la xiriira ayaa sameeyay barnaamijka sakhiray in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi lahaa. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti lahayn gudaha iyo hawlaha qaab beddelidda waa dabagal fudud oo la hirgeliyo. Si aad u hesho habka toosan Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in talaabooyinka kaas oo lagu hoos ku xusan la raacay sida ay sidaa tahay in dadka ku heli marnaba galay arin kasta marka aad isticmaalayso barnaamijkan si loogu badalo faylasha sida ay tahay doonista iyo rabitaan. Isticmaalka waa mid fudud oo user xaqa u baahan yahay in la raaco tilmaamaha la soo hoos ku xusan si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan yihiin dhalin waqti lahayn oo dhan ku jira;
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html waxaa la socda in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo ku rakiban. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay si loo hubiyo in waxa la bilaabay oo ay ku darto files button waxaa riixi si loo hubiyo in files waxaa lagu daray barnaamijka:
2. arrow ayaa haddaba waa in la riixi si loo hubiyo in menu u muuqataa ka halkaas oo user u baahan yahay si loo hubiyo in goobaha wax soo saarka ayaa la doortay oo qarka u saaran file waa in si aanay u soo noqon,
3. button diinta waa ka dibna in la riixi si loo hubiyo in barnaamijka uu bilaabo shaqada iyo user helo wax soo saarka sida ku format iyo goobaha la soo xulay in arrintan la xiriira:
Muhiimadda qaab mp3 ayaa sidoo kale lagu xukumi karaa xaqiiqada ah in barnaamijyada waaweyn iyo OS sida daaqadaha iyo Linux qaab u shaqeeyo sida arrimuhu default ah iyo waxa ay taasi la hubiyo in adeegyada ugu fiican ayaa la siiyaa si ay dadka u isticmaalaan hababka qalliinka oo kale. Sidoo kale waa mid ka mid ah qaabab kuwa aan marnaba la kulmaan qalad ah ee nooc kasta iyo in erayada fudud waxa la sheegay in laga yaabo in qaab mo3 waa nooc ka mid ah oo kulan qaladaad yar marka la barbar dhigo ka qaabab kale ee la heli karo suuqa. Marka ay timaado in m2ts in mp3 diinta ka dibna waxaa jira tobanaan kun oo convertors adduunka oo dhan, taas oo la hubiyo in arrinta la xalin u user iyo tutorial waxa uu sidoo kale loo qoray si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab waa cabsi miidhan, taageeridda iyo is tiirsan dhinac kasta.
> Resource > MP3 > Sida loo badalo m2ts in mp3 on daaqadaha iyo Mac